Daawo: Saameynta uu Reebay Dhulgariir Xoogan oo Laba Jeer oo is Xi xigay ku Dhuftay Wadanka Talyaaniga | Kismaayo24 News Agency
Daawo: Saameynta uu Reebay Dhulgariir Xoogan oo Laba Jeer oo is Xi xigay ku Dhuftay Wadanka Talyaaniga
Friday October 28, 2016 - 9:55 under Somali News by Tifaftiraha K24
Dhulgariirka labaad ee isla goobta ku dhuftay aad buu uga xooganaa kii hore. mid ka mid ah dadkii goobjoogga ahaa ayaa u sheegay telefishan Talyaani ah in uu arkay guryo dumayey oo uu toos u eegayay markay isku fadhiisteen.
Shaqaalaha gargaarka ee ka hawlgalaya goobaha mashaqadu ka dhacday ayaa weli qiimaynaya khasaaraha dhacay inta uu leegyahay.
Qaar kamid ah Kaniisadaha qadiimka ah ee ku yaal goobaha dhulgariirka ka dhacay ayaa la sheegay inay gebi ahaan burbureen, waxaana sidoo kale khasaaro xoogleh soo gaaray qaar kamid ah goobaha taariikhiga ah ee ku yaal bartamaha dalkaasi Talyaaniga.
Halkaan Hoose ka Daawo Sawirrada Dhulgariirka